मुलुकको पहिलो पाठशालाको विजोग ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
मुलुकको पहिलो पाठशालाको विजोग !
विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका राजधानीका अधिकांश विद्यालय पुनःनिर्माण नहुँदा बालबालिका अझै टहराभित्र आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन बाध्य छन् । भूकम्पले विद्यालय रहेको भवन भत्किएपछि नयाँ भवन निर्माण हुन नसक्दा मुलुककै पहिलो पाठशालाका रुपमा स्थापित दरबार हाइस्कुल भानु माविका विद्यार्थी यतिबेला टहरामा बसेर पढ्न बाध्य छन् ।
त्यसैगरी पद्मोदय घुम्तीनजिकै रहेको पद्मोदय उच्च माध्यमिक विद्यालयको भवन भूकम्पले भत्किएपछि नयाँ भवन बन्न सकेको छैन । त्यस विद्यालयका विद्यार्थी अहिले पनि टहरामा बसेर पढ्न बाध्य छन् ।
प्राध्यानाध्यापक मीना कोइरालाले भवन निर्माणका लागि आफूले पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले स्रोत जुटाउन नसकेका कारण पनि भूकम्पका कारण भत्किएका विद्यालय पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।